samsung अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: samsung
डोम » "सामसुung" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
सामसु्गले एडिडासको सहयोगमा नयाँ हेडफोनहरू प्रस्तुत गर्‍यो
एडिडास, प्रीमियर, Samsung, हेडफोन
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी बड प्रो वायरलेस हेडफोनहरू अहिलेसम्म तीन रंगमा उपलब्ध छन्। एडिडाससँगको सहयोगका लागि धन्यवाद, यो परिवर्तन हुनेछ र कम्पनीले यस उपकरणको पूर्ण रूपमा नयाँ, सेतो संस्करण सुरू गर्नेछ।
सामसु Study अध्ययन: के स्वचालित ड्रायरहरू डिशवाशरहरूको रूपमा चाँडै नै लोकप्रिय हुनेछ?
अनुसन्धान, Samsung, स्मार्टथिंग्स, ड्रायर
एक डिश वाशर आज एक फ्रिज वा वाशिंग मेशिनको रूपमा सामान्य छ। यद्यपि यो सधैं हुँदैन। उपकरणहरूबाट केहि थोरै घर सहायकलाई किन्न सक्छन् कि बर्तन धुने धेरै बनाएको ...
Siemens EQ.9 प्लस। सिमेन्सले स्मार्ट कफी मेशीन देखाउँदछ
गृह जडान, Samsung
हाम्रो घरहरू कार्यस्थल भएको ठाउँमा, धेरै मानिसहरूले सुगन्धित, उत्तेजक कफिको सम्झना गर्दैनन्। मसँग पहिले नै क्याफेमा जान जंगली इच्छा छ। सीमेन्सले यस बीचमा सीमेन्स EQ.9 स्वचालित एस्प्रेसो मशीन प्रस्तुत गर्दछ, जुन ...
सामसुले ड्रोनहरूको साथ स्मार्टफोन र वाचहरू प्रदान गर्दछ!
सामसु,, आधुनिक प्रविधिहरूको संयोजनमा, आयरल्याण्डमा आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई स्मार्टफोन र स्मार्ट वाचहरू प्रदान गर्दछन् धेरै असामान्य तरिकामा - ड्रोनहरूको माध्यमबाट। सामसुले एक नवीन वितरण सुविधा प्रस्तुत गर्‍यो! सामसुले यस्तो परिचय गराउन लामो समयदेखि सोचेको छ ...
सामसु survey सर्वेक्षण: पोलहरूले आधुनिक वाशिंग मेशिनबाट के अपेक्षा गर्छन्?
Samsung, स्मार्ट samsung कुराहरू
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्य टेक्नोलोजीहरू सहित सफा गर्ने धुने मेशिनहरू र ड्रायरहरूले दक्षता कायम राख्दा धुने समय छोट्याउने र वातावरणको लागि राम्रो हेरचाहलाई अनुमति दिने पोलमा बढी र चासो जगाउँदछ। नयाँ छनौट गर्दा उपभोक्ताहरू केमा ध्यान दिन्छन् ...
नयाँ सामसु AI एआई कन्ट्रोल धुने मेशिन र ड्रायरहरू - पूर्ण रूपमा संयुक्त
तिनीहरू धुने समय छोट्याउँदछन्, कपडाको ख्याल राख्छन् र पानी र विद्युत् खपत अनुकूलन गर्दछन् - यी नयाँ सामसु washing्ग वाशिंग मेशिनहरू र ड्रायरहरू नवीन एआई कन्ट्रोल प्यानलको साथ छन्। सहज अपरेशनलाई धन्यवाद, सहयोगको सम्भावना, ...
के द्वारा उत्तम धुलाई मिसिन हो। पोलिस ग्राहक? सामसु research अनुसंधान परिणामहरू
प्रश्नावली, सर्वेक्षण, कपडा धुनी मिसिन, Samsung
सामसुले हालसालै पोलिश उपभोक्ताहरूले उनीहरूको वाशिंग मेशिनबाट के अपेक्षा राख्ने भन्ने बारे एउटा सर्वेक्षण गर्यो। सर्वेक्षणमा त्यहाँ धेरै फरक जवाफहरू थिए जुन तपाईंलाई अचम्मित पार्न सक्छ। नयाँ वाशिंग मेशिनमा केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू हुनुपर्दछ। नयाँ वाशिंग मेशीन
सामसु फेरि टिभी बजारमा अग्रणी छ
र्याङ्किङ्ग, Samsung, टेलिभिजनहरू
सामसु लगातार पन्ध्रौं पटक विश्वव्यापी टिभी बजारको नेता भयो। कोरियाली निर्माता धेरै वर्षदेखि रोकेको छैन र केही पनि यस पक्ष मा केहि परिवर्तन हुनेछ भनेर संकेत गर्दैन। सामसु यसमा ...
सामसु्गले पुरानो स्मार्टफोनका लागि वन UI 3.1.१ अपडेट जारी गर्दछ
aktualizacja, Samsung, स्मार्टफोन
वन UI 3.1.१ अपडेटले सामसु'sको पुरानो स्मार्टफोनमा पहिले नै हिट गर्यो। अब देखि, तिनीहरू यो प्रयोग गर्न सक्दछ, अरू बीचमा ग्यालक्सी एस २०, नोट २०, ग्यालक्सी एब 20१ र जेड फोल्ड २ स्मार्टफोन। सामसु Samsungले यसैले पुरानोको हेरचाह गर्यो ...
आधिकारिक रूपमा: सामसु Galaxy ग्यालेक्सी F62 एक शक्तिशाली ब्याट्रीको साथ! यसले प्रभाव पार्छ!
Samsung, samsung ग्यालेक्सी, सामसु g ग्यालेक्सी एफ १, स्मार्टफोन
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी F62 सामसु fromको पछिल्लो मिड-रेंज स्मार्टफोन हो। हामीलाई पहिले नै यसको वास्तविक मूल्य र तकनीकी विशिष्टता थाहा छ। यसको ब्याट्री एक छाप बनाउन सक्छ! उत्कृष्ट ब्याट्री, यद्यपि तपाईं अझै पोल्याण्डमा फोन किन्नुहुने छैन। स्मार्टफोनको मूल्य आकर्षक छ, किनकि ...